Akuko - Gini bu ihe eji etinye ya na uzo
Wụ na-ezo aka na otu ịwụ ahụ eji gwupụta ihe ndị rụrụ arụ dịka ala, aja aja, nkume na mkpofu ihe owuwu. Ihe mejupụtara ya bụ efere ala, efere mgbidi, efere ntị, ntị ntị, efere ezé, efere akụkụ, na ezé ịwụ. Ọ bụ ụdị ngwaọrụ arụ ọrụ nke a na-etinyekarị na ihe nyocha maka igwu ala. Enwere ike ịkekọrịta ihe nke Congqin na-egwu ala bọket n'ime bọket bọket, bọket ihuenyo, bọket na-agba ụwa, bọket nkume na bọket m.
E kewara bọket e ji akụpu ihe n’ime bọket ndị na-ewu ewu, bọket ndị e wusikwuru ike na bọket m na-akụ dị ka ihe ndị e ji rụọ ọrụ.
Ọkọlọtọ ịwụ ihe ka nke anụ ụlọ elu-edu elu-ike bughi steel steel Q345B. Njirimara nke ọkọlọtọ ọkọlọtọ: bọket ọnụ ebe ka ukwuu, na o nwere a ibu stacking elu, ya mere o nwere a elu ejupụta ihe; ọ na-azọpụta oge ọrụ ma rụọ ọrụ nke ọma. Adabara maka ọrụ ọrụ dị ka ịwepụta ụrọ n'ozuzu na ibudata ájá, ala na gravel.
A na-eme ka bọket ahụ gbasiri ike ma jiri ihe dị elu nke nwere ike na-eguzogide ígwè mee ka ọ sie ike maka nrụgide dị elu na akụkụ ndị na-adịghị ike na-adabere na bọket ọkọlọtọ; akụkụ ndị na-adịghị ike nke efere oche ezé na efere n'akụkụ akụkụ bụ nke ụlọ dị elu nke dị elu na-eyi akwa na-eguzogide ihe nchara NM360, efere efere, ogologo ndụ ọrụ. Nketa niile uru nke ọkọlọtọ ịwụ na ukwuu mma na ike na-eyi ndị na-eguzogide. Ebe obibi dị adị bụ ọrụ dị arọ dị ka igwupụta ala siri ike, gravel, gravel loading, wdg.
Dịkwuo efere mkwado na ala nke na-egwupụta bọket; mụbaa efere nche n'akụkụ; wụnye efere nchebe, tinye usoro arc abụọ na ala nke ịwụ ahụ iji mee ka ikiri ụkwụ nke ikiri ụkwụ dịkwuo ala ma belata akwa; ọdịiche ahụ nwere ike idozi na njikọ ya na mkpisi Set nke akụrụngwa; jiri Swedish HARDOX ultra-high-ike na-eyi akwa na-eguzogide ọgwụ, nke na-eme ka ndụ ngwaahịa dị ọtụtụ oge; ezé ịwụ ahụ bụ ezé ịwụ pụrụ iche maka nkume. Mee ka ngwaahịa a bụrụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi karị, ịrụ ọrụ nsị ka mma, na akụnụba. Gburugburu ebe obibi: Ngwuputa nke okwute siri ike, okwute siri ike na oke mmiri na ala a gwakọtara na ala; oké arụmọrụ dị ka loading nke ike nkume na gbawara ore.